Bentley iyo AutoDesk ayaa wada shaqayn doona - Geofumadas
Luulyo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Shir jaraa'id, labadan shirkadood oo software ah ayaa ku dhawaaqay heshiis ah in la balaariyo wada-shaqeeynta u dhaxeysa dhismaheeda, injineernimada iyo dhismayaasha dhismaha ee ay yaqaanaan astaamaha Ingiriisiga AEC. Waxaan wada hadalnay waqti hore isku dheelitirnaanta labada tiknoolaji; iyo sida ay u tahay war wanaagsan, AutoDesk iyo Bentley waxay bedeli doonaan buug-yadooda, oo ay ku jiraan RealDWG si ay u fuliyaan kartida akhriska iyo qorista labadaba dgn ama dwg labadaba iyada oo aan loo eegin barxad ay ku shaqeynayaan.
Tani waxay iigu muuqataa aniga mid ka mid ah warka ugu fiican ee aan maqalay, gaar ahaan sababtoo ah at this point ama AutoCAD iyadoo sanadihii 25 iyo Microstation iyada oo 27 (oo aan ku jirin 11 hore) ayaa dib u soo laaban doona ka dib markii ay si fiican u taagan yihiin oo ay ka badbaaday dagaalkii wakhtigaas oo ay tiknoolajiyadu aad u gaaban yihiin. Si aad u taariikhda, Microstation ay u suurtagashay in ay akhriska iyo qoraalka natively on format billabo iyo AutoCAD oo aysan awoodin in ay soo dhoofsadaan file DGN ah, laakiin waxa loogu talo galay waa in labada qaabab leeyihiin dhismaha la mid ah mabda 'ma aha oo kaliya in codsiga aasaasiga ah laakiin takhasusyada kala duwan ee AEC, waxaa suurtogal ah in la abuuro heer ay soo buuxin karto heerarka OGC sida qaabka maaraynta vector.
Intaa waxaa dheer, labada shirkadood loo fududeeyo doonaa habka ku qubanayo dhexeeya codsiyada labada naqshadda, injineernimada iyo dhismaha sida in ay isu taageeraan interfaces barnaamijyada ay (oo isdiyaari). Qorshahan, Bentley iyo AutoDesk labadaba waxay u oggolaan karaan mashruuc in lagu qaado goobo kala duwan, tusaale ahaan dhammaan lakabka 2d ee diyaaradda waxaa lagu dhisi karaa AutoCAD, laakiin waxay sii wadaan xaraaradda 3D ee Bentley Architecture.
Interoperability ayaa xaami ah dadka isticmaala ee design iyo injineernimada dhufto laakiin ilaa hadda aan arkay line geospatial xoog. 2004 daraasad ku sameeyey by Machadka Qaranka ee Heerarka iyo Technology, US ogaaday in kharashka si toos ah maal dhufto waqti interoperability filnayn wuxuu ku saabsan yahay $ 16 trillion sannadkii !!!
Ujeedadu waxay tahay in dadka isticmaala ay naftooda u huraan inay shaqeeyaan, abuuraan, cabaan halkii ay ku adag yihiin qaabka faylasha ama sida ay u qeybin lahaayeen.
Bal qiyaas la AutoDesk Revit shaqeeya, iyo inay u leeyihiin hoosaad ah Bentley STAAD ka shaqeeya qaab hal, maamulka xogta NavisWorks iyo geeyay webka by ProjectWise ... wow !!!, isbedelka this sheeko isku mid ah.
Tilmaamahani wuxuu u muuqdaa mid aad u wanaagsan, gaar ahaan qayb ka mid ah AutoDesk, inkasta oo uu leeyahay qaybta ugu weyn ee suuqa, wuxuu aqoonsan yahay in macaamiil badani ay isticmaalaan faa'iidooyinka labada goobood maxaa yeelay waxay ugu dambeyntii og yihiin sida aad uga heli karto.
Post Previous«Previous Liiskee Lincoln wac mashruuc cilmi baaris ah 2008 / 2010
Post Next Sidee Koorka Real Estate Cadastre u socdoNext »